China Vacuum imba muchina fekitari uye bhizimisi | Boya
Kutanga iwe unofanirwa kuisa chikafu mumabag ekurongedza wobva waisa mukamuri yekuvharidzira .Mushure mekunge yatendeuka ichatora mweya kubva muchimbuzi mukamuri uye bhegi .Kana iyo yekuzadza yekurongedza maitiro ichipedzisa inoisa mucherechedzo bhegi.
Makiyi akakosha senge pazasi:
●Yepamusoro nhanho yekuchinjika uye kurongedza mhando
●Yakasimba uye yakasimba dhizaini
●Kushandiswa kwakanaka kwesimba uye zvekutakura zvinhu
Mishini yekuchenesa yemakamuri yaBoya ndeye ese akakwirisa ekurongedza mhando, yemuchina yakachengeteka maitiro ndeimwe yezvakanyanya kukosha chinhu .Iyi diki kamuri muchina kuchengetedzeka kugadzirisa neakasiyana mabhegi zvinhu. Inogona kuve yakasarudzika yakagadzirirwa gasi yekutsvaira sisitimu uye sarudza michina ine pombi pombi.
Sekupa mutengesi mhinduro dzakakwana, tinogara tichiona kubatana pakati pekupakata zvinhu, vharuvhu, mhepo yakapoteredza pasi, chigadzirwa, nemuchina zvinotorwa mukufungwa - uye isu tinowirirana michina neyakagadzirwa tekinoroji uye zvigadzirwa.
Tinoda kuve chako hunyanzvi hwekurongedza dhizaini yakasarudzika yekupakata mhinduro ndeyako chete!
Pashure: thermoforming muchina
Zvadaro: Vacuum ganda muchina